URaytheon uphumelele isivumelwano se-Space Force OCX sokutshintsha ikhithi ye-IBM ye-GPS III - I-Ocean-Components.com
IkhayaIindabaURaytheon uphumelele isivumelwano se-Space Force OCX sokutshintsha ikhithi ye-IBM ye-GPS III
Iza kuthatha indawo yeekhompyuter ze-IBM ezisetyenziselwa ukulawula indibaniselwano ye-GPS kunye neenkqubo ezivela kwiHewlett Packard Enterprise, phantsi kwemvumelwano ebiza i-378m yeedola. Umsebenzi uza kugqitywa ngo-Epreli ngo-2022 kwaye uyinxalenye yenkqubo ebanzi ye-GPS Enterprise Modernization ye-GPS III.
I-OCX yenzelwe ukuhambisa umthamo we-satellite ephindwe kabini, ukuphuculwa kwezibonelelo zokhuseleko lwe-cyber, ukuphuculwa kokuchaneka, ukufunyanwa okwamkelweyo kwehlabathi ngokufunyanwa kwezinto ezinamandla ngokuchasene ne-jam kunye nokufumaneka okuphuculweyo kobunzima bendawo enzima.
"I-OCX ibalulekile ekuqhubekeni phambili nemizamo ephambili yelizwe yokuphucula i-GPS ngamakhono amatsha kwezomkhosi kunye nawaseburhulumenteni, kubandakanya ukhuseleko oluphuculweyo, ukuchaneka, ukuthembeka, kunye nentembeko," utshilo uBarbara Baker, uMkhokheli we-SMC kunye nenkokeli yeCandelo loLawulo. "I-OCX izakuzisa amandla azinzileyo, anokuthenjwa e-GPS kwimfazwe yaseMelika, kumadlelane, nakubasebenzisi baseburhulumenteni."
Ukupheliswa kwekhithi ye-IBM kwaqala ukubangelwa yi-IBM x86 yomgca wemveliso ethengiselwe eLenovo, nge-IBM izibophelele ekuxhaseni izixhobo zabo kude kube ngo-Agasti ka-2022.
"Kule minyaka mibini inesiqingatha idlulileyo, okoko i-OCX yaphulayo kulwaphulo-mthetho lwayo lwe-Nunn McCurdy, iRaytheon ibisenza njengoko bekucwangcisiwe, sinika intembelo kumandla we-OCX ekuguqukeni kwimisebenzi, utshilo uLt. Gen. John Thompson, umphathi weSMC. Uphuhliso lwesoftware lugqitywe ukuwa kokugqibela kwaye inkqubo ikwisigaba sokudibanisa kunye novavanyo. Ngaphantsi konyaka, uRaytheon uza kuhambisa isiseko sesoftware esifanelekileyo esisebenza kwiqela leGPS.
"Oku kusinike ukuzithemba ukuba sinesisombululo sobugcisa esisebenzayo se-OCX esibonelela ngesiseko sexesha elide se-Hardware esihlangabezana neemfuno zethu zokhuseleko lwe-cyber," utshilo uLt. Col. Thomas Gabriele, inkokeli ye-OCX ye-SMC. “Njengoko uRaytheon eqhubeka nokulandela umkhombandlela kwizivumelwano zabo, ukulungisa umngcipheko wokhuseleko lwe-IBM engabalulekanga unobuqili bokuhambisa phambi korhulumente. Nangona olu tshintsho luhanjiswe ngurhulumente luya kuba nefuthe kwishedyuli yaseRaytheon, urhulumente uxanduva lokuphendula iRaytheon ngokuhambisa isoftware efanelekileyo ngaphambi kokudibana kwiqonga le-HPE nokuthumela kwiindawo zokusebenza. ”
ISebe lezoKhuselo lase-US
Kwiveki ephelileyo I-US SPace Force ibhengeze isivumelwano, kwaye izolo isebe lezomkhosi lase-US likhuphe iinkcukacha zesivumelwano.
"Ukulungiswa kwekhontrakthi kuya kufuna ukuba iRaytheon ithathe indawo yezixhobo ze-IBM ngezixhobo zeHPE kuzo zonke ii-OCX Block 1 Environments Enokufika," utshilo isibhengezo. Umsebenzi uza kwenziwa e-Aurora, eColorado, kwaye kulindeleke ukuba ugqitywe ngo-Epreli 30, 2022.
Indawo kunye neZiko leeNkqubo eziMiselweyo zisekwe kwiLos Angeles Air Force Base. Njengokukhangela i-GPS uxanduva lwayo kubandakanya unxibelelwano lweSatellite yasemkhosini, i-satellite satellite, ukukhutshwa kwendawo kunye neendlela ezahlukeneyo, uthungelwano lolawulo lwe-satellite, iinkqubo ezisekhaya infrared, kunye nobuchule bendawo yokuqonda.
Umfanekiso: Ifoto yomkhosi woMkhosi wase-US ngu-Airman uAmos Lovelace - Ukusuka ngasekhohlo, u-Col Laurel Walsh, umphathi we-50th Operation Group, kunye ne-Airman 1st Class Michael McCowan, 2nd Space Operation satellite satellite system kunye nomcwangcisi we-mission, anike umyalo wokugqibela ekuyekeni isithuthi seSatellite. Inani lama-36 kwiziko lemfundo yomoya eStrriever, eColorado, nge-27 kaJanuwari ka-2020. I-SVN-36 yasungulwa ngo-Matshi 10, 1994, yodlula nobomi bayo yoyilo phantse iminyaka esixhenxe.